डा. गोविन्दराज भट्टराई, (ट्यांगला फाँट, ललितपुर)
शब्दहरु अलिक भुत्ते भएर हो कि जस्तो पनि लाग्छ तिनीहरुले काट्न छोडेका छन् । राजनीति गर्नेहरुले भनौँ सरकार चलाउनेहरुले यो देशमा सबैभन्दा बढी शब्दको प्रयोग गर्दछन् । पानी विजुली टेलिफोनको झैँ शब्द प्रयोगको कर लाग्ने हो भने उनीहरुको तलब बच्ने थिएन तर हेर्दा लाग्छ प्रकाश झैँ, वायु झैँ शब्दहरु निःशुल्क छन् र निःशुल्क ठानेर ती खर्च गरिरहन्छन् । वास्तवमा ती निःशुल्क ता होइनन् । जलवायुको प्रकाशको अतिप्रयोग वा दुरुपयोगले सबै प्रदुषित भए झैँ अतिप्रयोगले हाम्रा शब्द पनि प्रदुषित हुँदा छन् । यो प्रदुषणमा राजनीतिकर्मी मरेर लागेका छन् । शब्द प्रदुषणको श्रेय उनीहरुलाई नै जानेछ । जलवायुको प्रदुषण विषयमा शब्द खर्चिन उनीहरु कोपनहोगन पुगे; त्यो भन्दा भयानक शब्द प्रदूषण छ हामी कहाँ जाने ?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
चल्तीका शब्द पुराना हुँदै गएपछि केही नयाँ पनि आविस्कृत छन् तर नयाँले पनि नथाम्ने भइसक्यो । कति पुराना शब्दमा धार लगाउँछन् केही नयाँ स्यूरिन्छन् तर अतिप्रयोगले मन्त्रको सिद्धि हराए झैँ उनीहरुका शब्दको सिद्धि हराइसकेको छ । मानिसले विश्वास गर्न छाडेका छन् । यो देख्ता मलाई अङ्ग्रेजी कवि एमिली डिकिन्सनको एक कवितांशको सम्झना हुन्छ-
हाम्रोमा यसको ठीक विपरीत हुन्छ । नबोलिन्जेल पवित्र रहेका जीवित शब्दलाई उनीहरुले बोल्दै मार्दै गरेका छन् । उनीहरुले विजुली काटे भनेर मैनबत्तीको मधूरो प्रकाशमा घोप्टिएर म यो दुःख प्रकट गरिरहेको छुइनँ प्रकाशको विरोधमा उभिएकाहरुले चौबीसै घन्टा विजुली मारे पनि हामी केही बोल्ने छैनौँ त्यो कर्म आश्चर्य लाग्ने छैन । किनभने यतिखेर बोल्नुको कुनै अर्थ छैन । उनीहरुले प्रज्ञाप्रतिष्ठानको प्राण खुस्काए भनेर पनि दुःख प्रकट गरिरहेको छुइन; यसमा दुःख वा आश्चर्य प्रकट हुनु पर्ने कारण छैन । जसलाई चेतनाहरु लडाएर सिर्जना शक्ति भत्काएर मानव सभ्यताको दीयो नै घोप्ट्याउनु छ जसलाई भौतिक र आत्मिक दुवै अँध्यारा प्रिय छन् ती मित्रसँग रिसाउनु व्यर्थ छ । क्रोध प्रकट गर्नु पनि व्यर्थ छ । त्यसमा मलाई कुनै दुःख छैन । कसैले आश्चर्य मान्ने छैन । उनीहरुसमक्ष बिमति वा विरोधको कुनै अर्थ छैन । यो डरलाग्दो समय छ । अक्षरमा रमाउनेहरुलाई बेलाबेलै थला पारेका छन् । पाखुरा मर्काइ दिएका छन्; तिघ्रा फर्काइदिएका छन् । अँध्यारा बन्दुक पड्काइरहेका हाम्रै आँगनमा । बन्दुक पड्केको बेला हाम्रा शब्दको आवाज सुनिँदैन । अन्यत्र पनि त्यस्तो भएको छ । बर्मामा विश्वविद्यालय बन्द भए, अफगानिस्तानका विद्यालय खण्डहरु भए र पनि समयले सास फेरिरह्यो । हाम्रोमा बल्ल एउटा प्रज्ञाको ढोका बन्द भएको छ । उनीहरु नै कुर्लिन्छन् । देशमा आएको लोकतन्त्र ठूलो कि प्रज्ञा प्रतिष्ठान सरकार ठूलो कि सर्जक चेतना देशको महान् उपलब्धीसँग सर्जकहरुको अरण्य रोदनको तुलना गर्ने समय छैन । यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन । राजनीतिले केवल राजनीतिको सर्वसत्ताले सबैलाई किचेको पेलेको बुल्डोजरले थिचेको बेला छ । हाम्रा शब्दको बतास कहीँकतै पुग्दैन । उनीहरुका शब्दको बतास पनि झन् कहीँकतै पुग्दैन । केवल शब्दाडाम्बरमा हुङ्कारको हावामा उनीहरु छन् । व्यर्थतावोध ग्लानी र पीडामा हामी छौँ । बीचमा सन्देह र भयको खाडल छ । संसार हाँस्तो हो सिर्जना चेतना संस्कार र जीवन परिस्कारको प्रतीक प्रज्ञा छोपेर केले शान्ति र स्थिरता ल्याउँछौँ भन्ने होला शायद केवल शब्दले । तर जब उनीहरु शान्ति सुरक्षा प्रयोग गर्दछन् जब आत्मनिर्णण र सहअस्तित्व भन्दछन् जब देश विकास प्रगति र छलाङ भन्दै लोकतन्त्रमा अवतरण गर्दछन् अझ गणतन्त्र ताकेर उचालिन्छन् एउटा ठूलो हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हुन्छ । शब्दको झ्यासमा लुकेर केवल शब्दले हामीलाई लोभ्याउँदै तर्साउँदै सबैसबै डन क्विक्जटहरु । हामीलाई कहीँ पुगिएला भन्ने कुनै विश्वास छैन किनभने-
एक मन ठान्छ लडोस् तर यो देशको शब्द उनीहरुको मात्र हो र त्यत्रो मनपरी गर्न दिनु ? भोलि लेखकहरुलाई ती चाहिँदा के होला भन्ने ठूलो पीर लाग्छ । आज उनीहरुले प्रज्ञाको ढोका बन्द गरे भन्दैमा हाम्रा कलम रोकिएका छैनन् । ती रोकिने पनि छैनन् । आज सभ्यताको धमनी खुस्काउनेहरु शक्तिमा पुगे सधैँ यस्तै रहने छैन । आज चेतनाका सम्वाहक कलमका विरोधी गर्जनले सबै स्तब्ध छन् सधैँ त्यस्तो हुने छैन ।
उनीहरुका झुट्टा शब्दले हाम्रा शब्दप्रयोग छेलिएको दशक । शब्दको दुरुपयोगले कला, संस्कृतिका निरन्तरतामा तुवाँलो लागेको दशक । नेपालको इतिहासमा यो भूलिने छैन । दशवर्षे द्वन्द्व र युद्धमा पनि नभएको दुर्गतिमा लेखकहरु लडाइएका दिनहरु । तर यस्तो अकर्मण्यताको विरोध गर्नु व्यर्थ छ किनभने तिनीहरु संवेदनाशून्य छन् ।
शब्दमा तागत छैन भनौँ भने यतिखेर लेखेका बोलेका स्वर सुन्दा सर्जकहरुले हजारौँ वर्षदेखि व्यक्त हुन नसकेको पीडा र कुण्ठा बोल्दैछन् नयाँ आकाङ्क्षा खोल्दैछन् । परिवर्तित मूल्यहरुलाई ह्दय खोलेर आह्वान गर्दैछन् । ती शब्दले विम्बले परोक्ष भाषामा प्रतीकले नौलो चाहना बोल्दैछन् । त्यो भाषा अन्तर्हदयको र नयाँ समयको उदात्त वाणी । सबैसबै उन्मुक्तिको प्यासमा छन् । सबै नयाँ जीवनको चाहनामा । सबै पुराना विचारका परम्परामा सिद्धान्तका पिँजरा बाहिर उभिएर सुसेल्दै छन् । नत्र कसरी सुमित्रा बाङ्देल 'चेली' ले यी शब्दविचार यसरी प्रस्तुत गर्थिन्ः
आजकी नारीले बोलेका शब्दहरु । प्रकट गरेका भावना र विचार । यिनमा कत्रो शक्ति छ कत्रो विरोध पुरुषका शताब्दीयौँका दृष्टिकोण बदल्ने समय छन् । यस्ता स्वरहरु सुन्ने सुनाउने एउटा साझा चौतारी खोइ ? यो समय राजनीतिमा लाग्नेहरु अत्यधिक रमाएका छन् । किनभने यो सारा परिवर्तन उनीहरुकै निमित्त भएका छन् । यी सारा परिवर्तन ल्याउने घडीमा सर्वत्र स्रष्टा नै उभिएका थिए तर आज ती सर्वाधित उपेक्षित छन् । यतिखेर कुनै ओतलाग्ने ठाउँ नभएका स्रष्टाले निरन्तर आवाज उठाएको आधा दशक भो तर खोइ सुनिएको । भनिएको यो परिवर्तन साहित्य संगीत कलामा लाग्नेहरुलाई सारा निरस उजाड र अर्थहीन लाग्दैछ । अभिभावकत्व विहीन सबै । पूर्वको पल्लो किनारबाट उठेर सुसाउँदै यस्ता शब्द सुनाउन आएकी 'चेली' । पश्चिमबाट उठेर आएकी सरस्वती प्रतीक्षाले यतिखेर सरकारले खोलेको 'पाठशालाविरुद्ध पाठशाला' खोल्ने अठोट गरेकी छन्-
सबै उल्ट्याउने प्रतिज्ञा छ । युगौँदेखि मौन दमितहरु यसरी उठेका छन् तर यी नवीनताहरुमाथि उही बुल्डोजर नाचिरहेछ । शब्द बोकेर हिँड्ने रित्ता छन् विचार बोकेर अकासिनेका पखेटा चुँडाइदैछन् । कत्रो उपेक्षा, कत्रो आडम्बर । केवल भयसृष्टि र उपेक्षाले चल्ने लोकतन्त्रको कत्रो अपमान भो । देश चिन्ताले जल्दैछ । कृष्ण प्रधानले यो निसासिदो बाटोमा विचारलाई नछेक्न आग्रह गरेका छन्-
बिचारोत्तेजक, मस्तिष्क उद्वेलित गर्ने निबन्ध |
अति राम्रो लेखन भएको लेख हो यो । भाषा शैली र विचारको उच्चकोटीको लेखनशक्ति भएको आत्मपरक निवन्ध यस्तौ निवन्ध गोविन्द दाजुको मधुपर्कको आत्मकरक निवन्ध सग्रहमा कसरी छुट्न गयो सम्पाकद र लेखक दुवै ले विचार गर्नु पर्ने थियो ।